Mariya mancuso - Ifemi lawyer kwi-i-brussels, lawyer ke e-Ofisini ukuya Tubize, Lawyer, umthetho, inqwelo kwi-i-brussels, Lawyer, zasekuhlaleni Umthetho ngalo Tubize
Mariya MANCUSO ngqo bagqiba ukwenza omnye njengoko a lawyer
Emva bakhe isifundo wazuza kwi-catholic Ngezifundo ka-Louvain ngoluhlomle kuwo kunye umthengi.
Mariya MANCUSO wenza i-uhlalutyo lomgaqo-imingcipheko
kwaye uchaza a isicwangciso-buchule procedural okanye amicable negotiation. ukuzisa malunga a iintlangaaniso isisombululo iingxaki idibene.
Free luhlomle kuwo kunye a lawyer - Lawyer Inkonzo
Xa ufuna umnxeba kuthi ukuba umgca WAM AMALUNGELO, ukuba ufuna ukufumana voicemail, nceda ufowunele qhagamshelana nathi ngqo nabaqondisi-mthetho esichaza Iqela LezomthethoNceda qaphela ukuba ngexesha elithile, amathuba (ekuqalekeni konyaka, iiholide, reentry enkundleni, okanye ezinye ixesha olukhulu usamuel), nabaqondisi-mthetho zibe ixakeke kakhulu ukuba anikele free iintlanganiso zokubonisana kwezi iimeko lwesaziso umyalezo iza ngokukhawuleza ezisasaziweyo, njengoko ngenxa apho luxanduva lwakho ukuba ngoko nangoko zithungelana kunye nezinye abaqondisi-mthetho kunokuba abo inkqubo Esemthethweni Iqela. Ukongeza, sikwenza hayi nika free luhlomle kuwo kuba nayiphi na irekhodi apho ixabiso imbambano incinci amabango Inkundla. Kuba ezi fayile, sicela wena dollazi kuba isemthethweni uluvo ifowuni kwaye sathi kanjalo kunikela impahla ukunceda ukuba adequately lungisa yakho ityala phambi ezincinane amabango Inkundla ukusukela awukwazi kuba bemelwe isemthethweni ingcebiso kweli tyeli. Ukulandela free luhlomle kuwo, ukuba ufuna entrust nathi kunye ugunyaziso ukuba bamele kuwe, wena uya kwazi ukuba imboniselo igridi amazinga ka-ekhethiweyo lawyer kwaye uza kukwazi kuba amavandlakanya oko uza kuhlawula ngasinye iinkonzo - (a la carte pricing). Ngendlela entsha, khetha i-associate lamagqwetha kuluhlu ekhohlo okanye ukukhangela nge-email okanye specialty umthetho, sokukhangela kwi phezulu iphepha.
Zonke nabaqondisi-mthetho nikela grid ka-amazinga kwi-imaphu ukuba uyakwazi udibane kwi oluneenkcukacha kwiphepha ngalinye iqabane lakho. Ngamnye associate izimele, kodwa abavumelekanga ukuba udibane onke amahlakani ukuzithwala ngaphandle yakho ugunyaziso, ube luncedo irhafu amancinane firms kunye nokomelela iqela omkhulu ii-ofisi. Amanye amahlakani ethu ukwamkela mandates ye-isemthethweni Aid, khangela kwi oluneenkcukacha inkcazelo ezinxulumeneyo Iqela leengcali zethu abaqondisi-mthetho ngoku lilawula iilwandle eziliqela zeefayili adibeneyo (formerly intshukumo collective).
Ukuba ucinga inokuba kwi isemthethweni imeko apho usebenza isihlwele abantu ndwendwela afanelekileyo candelo collective iintshukumo.
iwebhusayithi kuba lawyer - ukubonakala: web-Arhente lawyer
yenza iwebhusayithi yakho ifemi
Siza kuphunyezwe kuba wena kunye nawe kwinxuwa ukuba uza uthelekiso ngqo yakho iziceloisazisi sakho umthetho ifemi ngaphandle kwakho ukwenza ngaphezu kuqhutywe iiyure ezimbalwa Omnye kuphela communications kuvunyelwe ngumthetho khondo lobungcali-mfundo lilonke lee-abaqondisi-mthetho akufunekanga kuthatyathwa lightly Ngo umnikelo kuwe tailor-made izisombululo e eyona ixabiso. Web-arhente isemthethweni Ingcebiso engages neqabane lakho ifemi ukufumana eyona umboniso eyona kunokwenzeka ukubonakala kwi-Intanethi. Nge-Web-arhente Lawyer. real unxibelelwano izixhobo ikuvumela ukwandisa kwishishini lakho.
Qhagamshelana - Lawyer kwi-Florence - Lorenzo Cirri
Kuba naziphi na iinkcukacha ezongezelelweyo okanye ukuba unqwenela ukwenza i-ukuqeshwa kunye omnye amalungu e-ofisini nabasebenzi, sikulungele ngalo yakho nokungcwatywaUmthetho ifemi ka-Cirri ifumaneka Florence kwi-kwisithili kunye amisele Campo di Marte e rue Marconi. Ngo imoto, kanye ngaphandle motorway, thatha kolawulo stadium Artemio Franchi.
Ifemi ifumaneka kwiziko amabini imizuzu ngaphandle uthatha i-akhawunti ye-traffic nokuma. Kuyimfuneko ukuba umnqamlezo i-yesango kwi-kolawulo Viale dei Mille kwaye kwangoko emva phezulu.
Ngo ezothutho ukususela ufako Santa Mariya Novella thatha ibhasi kolawulo yima Sabiatino. Ngoko khwela phantsi yima Marconi Ikhabhinethi, ngoko ke, ebekwe kancinci ngakumbi phezulu street.
UDANIYELI TAMISIER LAWYER BEAUSOLEIL
Ufuna ukusombulula ungquzulwano lobuqu okanye elinolwazi
Kwimeko imbambano kwi imirhumo, kuyenzeka ukuba isibheno a médieteur ukuba umthengi, ngaphandle ebangela iindleko ukuba abe ukuyinyamezela ngumthengiNaye ulwazi lomthetho osayilwayo weofisi kanozikhalazo, ikuvumile yi-National Council of the bar ngala alandelayo: Umnu Jerome HERCE, amashumi amabini rue de Londres, PARIS. e-mail: iwebhusayithi: htts: mayuda-consumer-lawyer kufuneka ube isemthethweni ingcebiso. Uvumelekile ukuba summoned phambi kokuba Inkundla umthetho. Yokugqibela ke umntu ukuba lokucebisa wena kuzo zonke iindawo abucala okanye kawonke-wonke umthetho kwaye bamele kuwe kuzo zonke iinkundla (isithili Kwinkundla ephakamileyo, Kwinkundla ephakamileyo, usapho Inkundla, Isigqeba Correctionnel, abachopheli-matyala de Commerce, Conseil de Prud'hommes, Yolawulo iinkundla, Inkundla Isibheno.). I-proximity le ikhabhinethi kunye principality ka-i-monaco ukuba Mfundisi Udaniyeli TAMISIER kanjalo wazisa ukuba ndibongoze phambi iinkundla ka-i-monaco. Mfundisi Udaniyeli TAMISIER iphethe Mfundisi II kwi-Zolawulo litigation kwaye Isiqinisekiso Aptitude kuba isemthethweni khondo lobungcali-mfundo lilonke kwaye ilungu bar MNANDI. Kufuneka ube isifrentshi Lawyer ukuze ikhusele inzala yakho kwi-France. Ufuna cela abanye umbuzo malunga isixhosa umthetho Uyakwazi uqhagamshelane Nomnu Udaniyeli TAMISIER kwaye uya kuphendula wena ngesingesi. Avete bisogno di un avvocato ngamnye difendere mna vostri interessi kwi-Francia. Avete una umbuzo da fare sulla legge francese Potete chiamare i-Avvocato Udaniyeli TAMISIER che vi risponderà kwi-italiano.
Wokuqhawula umtshato - wokuqhawula umtshato
Wokuqhawula umtshatonangona kunjalo amicable. i-nkqubo ukuba rhoqo ixesha elide kwaye expensive Ungakwazi wokuqhawula umtshato ngaphandle a lawyer.
Umnikelo isivumelwano - isivumelwano Isikhokelo umnikelo
nkqu ukuba thina musa ukusoloko cinga
A umnikelo ngu isivumelwano
Igalelo kwi-ngqesho alimony
ndiza nje kokuba enye ingxaki kunye wam ex-husband
Eyona mpendulo: Molweni
Wafumana nje ngexeshaSoqeqeshoNamhlanje Konke oku enye ngeveki Elide baphile jeudredis kwaye vino.
JIKELELE amandla LAMAGQWETHA oku isivumelwano ngu esayiniweyo kwaye uqalisa ukusebenza ukususela NGOMHLA, PHAKATHI: INKAMPANI YAKHO IGAMA ("Iarhente"), corporation, SIBONAKALISE UHLOBO DESOCIÉTÉ idityaniswe phantsi regime governed ngumthetho(s) CHAZA UMTHETHO CONSTITUTING ELAWULA UMTHETHO, nabantliziyo ebhalisiweyo-ofisi ifumaneka ku: IDILESI YAKHO UZALISWE enye inxalenye NO: IGAMA INQUNUNU ('Igqwetha'), corporation, SIBONAKALISE UHLOBO INKAMPANI idityaniswe phantsi regime governed ngumthetho(s) PHAWULA LOICONSTITUTI Ne-library koxwebhu izikhokelo lelona ngenkxaso ezikhoyo namhlanje, Ushishino‑‑‑Ibhokisi uza kuzihlawula zonke iimfuno zakho yokubhala ukuqala ishishini lakho kude kube maturityIbhalwe ngu abaqondisi-mthetho kwaye ishishini abacebisi, onke amaxwebhu ingaba isemthethweni kwaye inkulu umgangatho, ukuthutha a corporate umfanekiso impeccable. Gcina amaxwebhu kwi-ifomati ye-Microsoft Word, iWork, okanye eyakhelwe-ngaphakathi umbhalo umhleli. Kubalulekile ngokwaneleyo phantse ukuba bazalise engenanto izithuba ngokusesikweni kuxwebhu lwakho. I-amaqela kufuneka ngokusesikweni ingaba kuchazwe kwi-ezizenzekelayo kwaye isikhokelo kuwe kwi-data unqwenela ukuba ufake, njalo ukwenza i-software kulula ukuyisebenzisa. Unako ukubala kwi imveliso ukuba evolves Sisebenzisa constantly ukongeza entsha amaxwebhu kwaye entsha ekunokukhethwa kuzo ukuzalisekisa izicelo zethu abathengi kwaye kwimakethi iimfuno ishishini kwi-intsingiselo ye-evolution. Onke amaxwebhu ziyafumaneka kwi-isixhosa, isingesi, isifrentshi, isispanish, isitshayina, isijamani, isi-Italian, isiphuthukezi. Ukwenza ushishino kunye langaphandle partners ayizange sele ngoko ke, kulula.
Ikhabhinethi Mfundisi Frederic CARREZ Lawyer kwi bar Mnandi
unxibelelwano kunye nokubandakanyeka kukho amaxabiso ngomhla apho zethu ifemi lukhuthaza Lawyer franco-Italiankanjalo uphendula kakuhle. Antibes (bar Fat) kwi-Italy. ngaphakathi bar Cuneo.
Incwadi isicelo kuba incwadi yokundwendwela
I-biometric incwadana yokundwendwela ufumana i-esemthethweni uxwebhu attesting ukuba isazisi yomntu, evumela kuye ukuhamba ngaphandle European Union okanye athabathe amanyathelo ukuze ufumane i-visa, umzekeloI-incwadi yokundwendwela isicelo kufuneka ezenziwe sesi sibini kwi umntu kunye onke amaxwebhu ayimfuneko: isazisi ikhadi (failing ukuba, wokuzalwa isiqinisekiso), iifoto ezimbini ukuba kusebenzisa kunye nobungqina bedilesi nje. Ukunceda wena, siya kunikela ngaba oku isampuli ileta kuba isicelo ukufumana amaxwebhu ukuba siqwalaselwe incwadana yokundwendwela isicelo. Khangela kanjalo zethu umzekelo ukuze ufumane i-national uchazo ikhadi okanye alungise impazamo kwi zasekuhlaleni state.
Njani ukwenza isikhalazo
Kuba factual kwaye musa ukubhala a samkele
Njani ukwenza ibango oko kukuthi kakuhle kwaye unika iziqhamoNjani ukuze ufumane refund, ingxelo a discontent kwaye ufumane i-impendulo efanelekileyo. Ibhunga: politeness ngu iqhosha kufumaneka ngenxa, nkqu xa imeko ufumana kunzima. Ukuba isicelo a refund, Ingxelo imveliso okanye inkonzo ukuba uphelelwe disappointed, Buza iinkcazelo malunga imveliso okanye inkonzo. Nceda qaphela ezinxulumeneyo imveliso. no, umhla wokuphelelwa, kwaye lemveliso igama imveliso, endaweni yokuthenga.
Nje ulumkele awuzukusebenzisa slang amazwi, okanye vulgar
ukuba ufuna ukwenza ibango, kubalulekile ukuba ufuna sibe nesiphumo: ngcono nokusebenza kakuhle kwamacandelo inkonzo, refund ka-imirhumo okanye umrhumo, ingxelo yakho dissatisfaction ukufumana isipho okanye isampuli amabango kwi-Intanethi ingaba rhoqo ngokulawulwa engcono ukulandelela (kunye iifayili, plots, ikhompyutha) ukuba amabango nge-imeyili ukuze babe zange safika zabo, indawo, ngaphandle kokuba ngeposi ebhalisiweyo. Ukongeza, asebenzise i-Intanethi, kufuneka uzalise kaninzi a uqhagamshelane ifomu kwaye awuyi kuba ukuba ahlawule nantoni na. Akukho postage, size okanye iphepha Hayi umzekelo-icatshulwe ukuba ungakwazi ukwenza ibango nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku. Kwaye ifowuni kuzo zonke kuyo Kukholisa a intlawulo emiselweyo, ugqitha n° overtaxed, kwaye sizimisele ngakumbi lula ezisuka zande kuba flustered. Sele uphephe.Soloko bahlala polite, ungaze ufake engalunganga amazwi okanye insults. Kukho akukho incopho, ayinjalo fun, kwaye kubalulekile isibali-productive. Usoloko ucinga ukuba kukho ngumqeshwa ukuba uza ukufunda isikhalazo sakho kwaye athathe ixesha ukuphendula kuwe, ngoko ke, hlala oluntu. Kuba konke oko, ungenza ngokukhululekileyo zichaziwe yokuba ungathanda ngayo, okanye hayi, ezifana enjalo imveliso okanye inkonzo, okanye kutheni ufuna disappointed. Musa zibalisa ubomi benu, ayithethi ukuba ukutsala pity, okanye sympathy. Yokuba kwi-Intanethi kubancedisi sele nto ukwenza kunye sudden ukufa yakho cat ukuba uphelelwe accompanied kule minyaka elishumi. Kwakhona, cinga yabasebenzi(e) abaya kuthatha ixesha ukufunda kwaye siphendule kuwe. Ukwenza ibango ngenene ikunceda ukuba iinkampani ukuqonda imizwa yakho ka-ummi-consumer, consumer-actor, kwaye ukuphucula iimveliso zabo kwaye iinkonzo ukuze babe isibheno kuwe kwaye thelekisa ngcono yakho okulindelweyo. Ngoko ke ufowunele kwaye enze ibango. Ukuba amashishini appreciate kakhulu ukuphucula iimveliso zabo neenkonzo, bamele kanjalo kakhulu elinovakalelo ukuba marks ka-affection, siyavuyisana xa sukuba ingaba usebenzela wenza okulungileyo. Musa hesitate ukwenza ibango kwaye baxelele ukuba ufuna appreciate iintshukumo zabo. Intshukumo: yakho imeko ingayalela ukusebenzisa isemthethweni elinolwazi ngubani onako lokucebisa kuwe yakho iinzame ileta kwezikhalazo waba zange intended ukubuyisela isemthethweni ingcebiso kungafuneka.
Namhlanje, zininzi imisebenzi 'ishishini banking', kodwa ukuba singathatha ingqalelo iintlobo abathengi kwaye iintlobo umsebenzi, sinako distinguish zilandelayo ngokubanzi iindidi: Ingqokelela ka-efakwa ebhankini, unikezelo ka-amatyala kunye nolawulo kuthetha ndleko ingaba eyona imisebenzi retail bankIinkonzo neemveliso ka-kwenye indalo (i-inshorensi, telephony, ekhaya iinkonzo, real estate.) ingaba kaninzi wanikela. I-imisebenzi retail bank ingaba umthengi-oriented abantu, liberal professions kunye nabalobi abakhasayo amashishini (shopkeepers, craftsmen.). Kodwa aba ngabo supplemented yi nkonzo ye umgama banking: i-intanethi banking (umthengi ubudlelwane phakathi) - intanethi bank. Mali eyenziweyo ezifana ipos, mergers kwaye acquisitions, issuances ka-securities okanye iimveliso zemali kwaye imisebenzi ka-uthengisa kwaye orhwebo kwi kwamanye amazwe kukho imisebenzi ethile kwi-BFI. Eyona abathengi le bank u-mali yotyalo-mali kwaye mikhulu iinkampani, institutional abatyali-mali, ingxowa-mali lwabalawuli, States. I-BFI ingaba amaqela amakhulu banking amaqela, enye kodwa bawufincile umbutho kwaye kwezabo yabasebenzi Kule residual udidi, thina kuqala ukufumana uthotho imisebenzi yolawulo ye-amaziko: ulawulo umbindi ngokwalo njengoko centralised imisebenzi (treasury, ulawulo ulawulo, njalo-njalo) Kukho kanjalo ngokufanayo imisebenzi yawo enkulu iintsapho kwixesha elidlulileyo (retail banking kwaye BFI): central directorates oluntu zokusebenza, intengiso, unxibelelwano, njalo-njalo.
Umthetho wama-neu fdes mthubi Vests ukuba Nancy: a lawyer ekuthatheni Emi - France ababanjiweyo (IVIDIYO) RT kwi-isifrentshi
Elinesibini kweyomqungu, kwemini, ngexesha rally kwi-Nancy, esibizwa kwi-icimile ka-vala ukuya anamashumi mthubi Vests, amapolisa baqhubeka ukuba arrest ye-lawyer François Vallas kuba"ukuphembelela ukuchasa"Yakhe custody waba wawaphakamisela kwi-kwangoko ngokuhlwa ngemini enye."Ngokunxulumene amapolisa, bekuya kuba prompted a verbal mthubi Vests ukuya uqhagamshelane ka amapolisa amagosa owathi trapped, kwimeko isiganeko unreported kwaye ke ngoko mthethweni,"watsho lo Ngu Republican lamagqwetha Nancy Francis Pérain. Kwi-vidiyo ibonise kwi qela kwi-Facebook yenziwe ukuba protest yakhe detention, omnye uyakwazi ukubona umntu umthetho kuthetha ukuba i-mthubi Vests, ngoko ke surrounded yi - CRS, babengenako kuba phantsi i interpellation:"Kufuneka ndivuma ulwaphulo-mthetho, okanye offense, okanye contravention. Ukuba amapolisa kufuneka isizathu ukukholelwa ukuba umntu abenako benze a ulwaphulo-mthetho, banako ngenisa custody. Kule meko, kubalulekile abo committing i-ukona ka-deprivation. wenkululeko", lance-t-il Ngexesha protesters abounded wakhe evakalayo, omnye wabo kusini na ke ukuba amalungu imikhosi ukuze kuthintela kubo,"kuba akukho sizathu", bavumeleni shiya premises. Imizuzwana embalwa emva kokuba ubungqina protester, ividiyo misa abruptly kunye of arrest Francis Vallas, abo wished, ngelize, wabe yakhe ishishini amakhadi protesters wishing ukusebenzisa iinkonzo zayo. Kakhulu ngokukhawuleza, inquiry sele elicited ingqumbo ka-Nicolas Dupont-Aignan. I-sihlalo we Emi - France, uqeqesho nkqubo kwenziwa lisebe lawyer, sele ukusebenza protested kwi Itwitter ngokuchasene arrest athe kuchaziwe njenge"scandalous".
Ngexesha lakhe ixesha custody, agripa ethe wacela"kuba urged i-protesters ukwaphula ukhuseleko icebo Kunzima kakhulu worrying kwi umthetho umthetho ukuze sibe ndawo amapolisa custody a lawyer ingaba umsebenzi wakhe: ukwazisa nobuthathaka babo amalungelo", ubani lowo reacted yakhe ukuphuma kwi-ofisi.
Umgaqo-nkqubo wenziwe ezisasaziweyo ukuba prosecutor ka-Nancy, abaya kuthatha isigqibo kwi intshukumo ukunika iinyaniso, emva ekubeni kuthathelwe ulwazi meko.
Okunokukhethwa kuko kwaye usapho imbambano
Kummandla osapho umthetho, siya kunikela isemthethweni opinions malunga amalungelo akho kwaye ingcebiso kwi eyona izicwangciso, kuthathelwa ingqalelo yakho ezithile imeko ukuze enforce amalungelo akhoZethu opinions kwaye ingcebiso ebolekiweyo ngomhla ukusika wendawo ulwazi kusapho umthetho kwaye disclosed kuwe ngendlela ecacileyo kwaye efikelelekayo ulwimi. Sisebenzisa yokubhala kuwe yakho izivumelwano ka-okunokukhethwa kuko phakathi de facto amaqabane okanye yakho isivumelwano phakathi abatshatileyo. I-drafting ye-conventions ka-okunokukhethwa kuko okanye wokuqhawula umtshato isivumelwano ayina secrets kuthi Zethu conventions ingaba cacisa, kulula isicelo, kwaye ibhaliwe entliziyweni indlela ezininzi ngempumelelo ukukhusela amalungelo akho. phambi kokuba inkundla, okanye umthetho kuwe in ukhuselo ukuba yakho ex-mlingane sele ezenziwe sesi sibini a isemthethweni ichiza Thina argue yithi rhoqo phambi iinkundla ukuba banga ubunyani amalungelo ethu abaxhasi.
Apartment kuba ziyathengiswa: isebenziseke iincam
Jurifiable ka-reliable isemthethweni ingcebiso kwaye ngqo
I-ukuthengisa i-apartment yi lengthy umgaqo-nkqubo, ingakumbi ukuba akubanga ezilungiselelwe kwangaphambiliI-elokugqibela ye-ziyathengiswa ngu necessarily ihlole nge notary-wonke. Apha ke yonke into ufuna ukwazi malunga ukuthengisa i-apartment ongenanto okanye uxakekile. Sithengise i-apartment unako thatha ixesha, ingakumbi ukuba ziyathengiswa ayikho ngokwaneleyo zilungiswe. I-ubunzima iza okokuqala ukususela yokuba zininzi iindlela ukuba sithengise i-apartment: imiqathango ye-ziyathengiswa kanjalo vary kuxhomekeke nokuba ngaba kukho sole umnini okanye ufuna wathenga apartment ngendlela ezimbini. Ngolwazi oluthe vetshe kwi-ga, ufunde ikhadi -"Kuthenga apartment". Kuzo zonke iimeko, kuyo yakho apartment e eyona ixabiso, kufuneka imiselwe ixabiso elikhulu. Ukuqala nge-estimating yayo ixabiso kwaye ke thatha ibhodi ukwazi njani yena ingaba thatha ixabiso (via ekhaya staging umzekelo). Umgaqo-nkqubo ukuba sithengise i-apartment zilandelayo ethile amanyathelo. Kwakhona, kufuneka ithuba isibheno ukuba i-real estate-arhente onikwe imvume yokulahlela amanyathelo athile. Kwezinye iinkqubo, jonga i-fact iphepha kwi ubomi okanye auction. Xa kufuneka ifunyenwe a enokwenzeka umthengi, kufuneka atyikitye a esa kundoqo isivumelwano ka-ziyathengiswa. Oko imisela ngaphandle imimiselo nemiqathango i-ziyathengiswa, kuquka ukuthengisa kwexabiso. Igama elithi"wangaphambili isivumelwano"kusenokuba confusing. Kubalulekile, ngenene, isivumelwano oko kukuthi authentic, elungileyo kwaye ngenxa ifomu, governed yi-imigaqo zasekuhlaleni Ikhowudi.
Igama elithi"wangaphambili isivumelwano"kuthetha inkqubo apho isivumelwano precedes yokugqibela isivumelwano ka-ziyathengiswa, commonly ekubhekiswe kuye njengoko"deed ka-ziyathengiswa".
Kukho iindidi ezimbini esa kundoqo izivumelwano: isivumelwano ka-ziyathengiswa kwaye isithembiso ziyathengiswa. Ngolwazi oluthe vetshe, funda ingxelo ikhasi"Kuchitha ziyathengiswa". Lokugqibela inyathelo lesi-ngu ukusayina i-deed ka-ziyathengiswa, apho carries ngaphandle unikezelo ubunini. I-deed ka-ziyathengiswa kufuneka ilungisiwe waza watyikitywa phambi notary. Ngolwazi oluthe vetshe, funda ingxelo amakhasi"Notary real estate"kwaye"Deed ka-ukuthengisa real estate". Kufuneka kubuyela i-apartment izitshixo umnini omtsha kwi efanayo umhla ukusayina i-deed ka-ziyathengiswa. Kwi-kubuyela, kufuneka ahlawule kuni ziyathengiswa ixabiso ukuba ngemini enye.
Kufuneka kukrazulwa yakho apartment kwaye ufuna kuyo oko phambi kokuba kuphele le ukuqeshisa. Ingaba oku kwenzeke Impendulo ngu-ewe. Rented indawo yokuhlala kusenokuba zithengiswe A rented ihleli akusebenzi nikezela-propati unmarketable.
Ezilungileyo ukwazi: kuya kuba nzima kakhulu kuyo yakho apartment uxakekile ukuba yakho tenant akakwazi kuhlawula zabo rents elungileyo kwaye ngenxa ifomu. Fumana abaqondisi-mthetho kwi uthathelo, thelekisa zabo linge.
Ibhunga Lawyer free kwi umnxeba, free isemthethweni ingcebiso
Ibhodi Free Lawyer inkonzo ufumana i-intanethi inkonzo emiselwe ukuba uza kukubonelela nge ulwazi kwaye isemthethweni aid yi-a lawyer kwi-intanethi. Musa yenzani oku ithuba okokuba wena ngapha kwaye ukufumana iinkonzo ibhodi isemthethweni hayi expensive ukukhusela amalungelo akho kwaye gcina yakho izinto ezichaphazela ngempumeleloYonke imihla, siya kufumana ngaphezu kwe- iifomu, kwaye ngaphezu asixhenxe inombolo unxulumano kwaye ezi amanani asoloko ukutshintsha. Thina enkosi yakho trust kwaye senza isithembiso ingaba bethu eyona ukuba yanelisa kona. Kwezinye iimeko, luhlomle kuwo ifuna imirhumo ethile, kodwa oku akusebenzi eyiyo a nokuzinikela ukuthenga kwindlela yakho isiqingatha. Kufuneka i-oyikhethileyo ukwamkela okanye walile Indlela yindlela elula: Thina diposons a libanzi womnatha umthetho ingcaphephe ukuba uza kukubonelela nge eyona ngcebiso kwimeko - luhlomle kuwo kwi-intanethi okanye nge-ifowuni. Ngoko ke, ezama uncedo okanye luhlomle kuwo, uza kubekwa kwi-touch kunye omnye amahlakani ethu ukuba icace phandle yakho meko ifuna ukuba la manyathelo okungenelela a lawyer kwi-ezinkundleni okanye awuyi kuhlawula naziphi na iintlawulo ezongezelelweyo. Sicebisa ukuba uthatha ixesha lakho ukubhala ingxaki yakho uze ufake uxwebhu Ufumana, kulungile, impendulo simahla, yi-ifowuni okanye nge-imeyili apha ngaphakathi ixesha ukuba akunjalo zingaphezu amane anesibhozo iiyure. Ukuba ufuna impendulo kwi-i-kaxakeka ngenxa ngxaki, uyakwazi umnxeba Yethu esemthethweni abacebisi ezifumanekayo amabini anesine amabini anesine kwaye ku sep tjours elizayo kwaye azise kuni inkxaso entsimini, umthetho. Thina garantisons i-yangasese kwaye yomtshutshisi zonke iinkcukacha ukuba siyakwazi ukubonelela seekers lolwazi. Lenkonzo ikuvumela ukuba kufumana free isemthethweni luhlomle kuwo ukuba uphelelwe oyedwa okanye elinolwazi, Ibhodi Free Lawyer inikezela isemthethweni uncedo umgca kuba abantu ukukhangela iimpendulo yomamkeli kwaye ngqo. Uza kuba njalo ithuba buza eyakho imibuzo ngqo kwi-intanethi ku-a consultant okanye lawyer. Yangasese: nabaqondisi-mthetho ezifunekayo ukumelana yi-imithetho ukuziphatha wabeka phantsi ngo khondo lobungcali-mfundo lilonke.
Valida - esibhedlele, rehabilitation, polyclinic - i-brussels
Sisebenzisa a esibhedlele ka-avareji hlala, ukuba yamkele yayo patients nge ukuqinisekisa continuity zabo care ngendlela ekhuselekileyo, umgangatho, kwaye oluntu-sizedEnkosi teamwork bonke bethu omkhosi, thina yenza i-optimize i-autonomy zethu patients yi-ukumisela iinjongo nokwakha le projekthi ye rehabilitation kwaye reintegration uphela, ngokunxulumene usapho lwabo isiqalo, loluntu, philosophical kwaye zonyango. Sisebenzisa oyena rehabilitation iziko lomthetho i-brussels kunye ezintathu care iiyunithi SP (care spéialisés yi-doctors kwaye yesitalato réadatation) anesine iiyunithi ka-G (specialized care kule geriatric rehabilitation) kwaye wamkelekile bonke abantu inkqubo rehabilitation ngenxa i-kunokwenzeka ingozi okanye ukugula. Kubalulekile ngomhla inkonzo zoluntu kwaye kanjalo ukuchongeka i-intuthuzelo nokhuseleko zethu hospitalized patients. Ngo ekubeni vala ukuba abantu kwaye wobulali doctors, sinako ukuququzelela, ukuba kuyimfuneko, kwaye banqwenela, interactions kunye zethu ezahlukeneyo partners kwi-institutional kwaye esibhedlele baza kuxhamla zethu premium womnatha.
Iinkonzo zomthetho kwi-Ukraine. Iinkonzo ka-abaqondisi-mthetho
Ngaphezu ikhulu firms abaqondisi-mthetho, kwaye ngaphezu ama abaqondisi-mthetho abakwicandelo ulungiselelo isemthethweni ngeenkonzo kubathengi bethuNabaqondisi-mthetho ingaba specialized ngendlela ezahlukeneyo kwiindawo umthetho kwaye ishishini. Uninzi nabaqondisi-mthetho ukunikezela iinkonzo zomthetho kwi-langaphandle iilwimi. Sisebenzisa constantly ukwazi uluhlu isemthethweni iinkonzo sinike ukuba abemi beli amashishini, ukukhuselwa, ukususela iinkundla kunye imikhosi umthetho nocwangco, inzala ukumelwa, drafting neenkqubo zomthetho amaxwebhu. kwi-Ukraine kwaye ngaphesheya, ubhaliso isebe ii-ofisi, private omhlaba, ubhaliso a ummeli-ofisi langaphandle inkampani, ubhaliso inkampani ukususela founders langaphandle, corporate umthetho, re-ubhaliso iinkampani. Ubhaliso i-estate, lawyer, ilifa umthetho, isemthethweni inkxaso ubhaliso i-estate, yokulungiselela lwamaxwebhu kuba ubhaliso lwe-estate, disputes njengelifa phambi kwenkundla, ingqwalasela ka-ilungelo ukuba ilifa phambi kwenkundla. Real estate lawyer, isemthethweni inkxaso real estate eyenziweyo, umthetho, izindlu, litigation, real estate, ukwahlulwa ipropati, ukusekwa ipropati amalungelo, ubhaliso umnini real ipropati.
Iinkonzo lawyer kuba iinkampani kwi Kwakhona, kwaye ngaphesheya, commercial umthetho, masiko umthetho, yolawulo umthetho, irhafu umthetho, nabasebenzi umthetho, litigation, mediation.
kwi-langaphandle iilwimi, ebhalwe uguqulelo wagqitywa ngowe-langaphandle iilwimi, ukutolikwa, uguqulelo wagqitywa kwi ezahlukeneyo subjects, isemthethweni uguqulelo, kwezoqoqosho uguqulelo, nezinye izihloko ka-lwimi. Apostille kwaye consular legalization lwamaxwebhu, notarization lwamaxwebhu, igosa uguqulelo amaxwebhu, notarised uguqulelo amaxwebhu. Imali lwamaxwebhu, emveni kokufumana uxwebhu, iimbali, ukukhangela kunye nempahla yexabiso ye ii-akhawunti kufunyenwe, ingqokelela ka-okwamkelweyo okuvela iinkampani inkqubo ephantsi-iqumrhu, ityala lonke ityala lesi imiba. Lawyer specialized kwi-intellectual property, ubhaliso copyright kwi Kwakhona, kwaye ngaphesheya, ukukhusela intellectual property, iphepha-mvume izivumelwano kunye copyright, ubhaliso urhwebo-marks kwaye iimpawu zokurhweba, royalties, yokulungiselela ka-immigration amaxwebhu, ubhaliso yokuhlala amaphepha-mvume, ubumi, visas. Immigration Iinkonzo ngaphesheya Notary Iinkonzo, real estate izivumelwano, iziqinisekiso amaxwebhu, ngayo intengiselwano, umtshato izivumelwano, amagunya lamagqwetha, declarations, njalo-njalo.
Ilungelo ngayo isicelo eso ukuba iinkampani kwi-ubunzima - mthetho Ikhosi
I creditor akakwazi ukufumana ilungelo intshukumo ngamnye
Ukufumana phandle ngakumbi ishishini Umthetho - abarhwebayo Umthetho - wokhuphiswano - european ishishini Umthetho - Firms kwi-ubunzima - Iziphumo wezorhwebo - intlawulo Ngemali kunye umniki - unikezelo Umthetho - mali kwiimarike Umthetho-matyala Umthetho - zasekuhlaleni Inkqubo - procedural Umthetho - Arbitration - unyanzeliso - ityala Imali - matyala Amaziko of administrative iingxoxo - administrative Izivumelwano - administrative Amaziko - wobulali Abasemagunyeni, yolawulo Umthetho, ipropati Esekelwe public-private wamazwe ngamazwe - ngamazwe kwezoqoqosho Umthetho - Ngamazwe Litigation - wamazwe ngamazwe - wonke Ngamazwe ubudlelwane phakathi - isixhosa Umthetho - i-american Umthetho - isitaliyane Umthetho - isijamani Umthetho - canadian Umthetho - Swiss Umthetho - Cameroonian umthetho Kamasipala senegalese Umthetho kwi-côte d'ivoire - OHADA Ikhonkco phakathi collective ize komthetho umhla emva roman umthethoKuba ixesha elide indima ukunyanzeliswa komthetho: egqiba ungquzulwano phakathi kwe-creditor kwaye debtor, kuba ixesha elide, bankruptcy umthetho, agciniwe ukuba traders, kuba debtor civilian, komthetho, debtor trader, umgaqo-nkqubo we bankruptcy. Kunye utshintsho ngumthetho, siza kolunye uluvo: collective nemigaqo-nkqubo zithe eyandisiweyo ngaphaya limited ummandla umthetho kwaye abarhwebayo umsebenzi we-traders, yandise bonke firms kwaye iphenjelelwe i-legislator kwi-sikhokelo somgaqo-ko-indebtedness ka-abantu. Omnye umbandela, ulwandiso kunokwenzeka kuphela yi-tshintsho lomgaqo-ngeenjongo zomthetho we collective iingxoxo, ubudala injongo: ukuba ahlawule i-creditor, kwaye namhlanje injongo na collective yeenkqubo yiyo ukuze anyange indebtedness ye-debtor kwaye uzame ukusombulula, uninzi rhoqo yi-umhleli wenqaku ye ityala. Neeyantlukwano ukwenza kubonakala a uphawu ka-ilungelo uphumezo. Collective umgaqo-nkqubo tends ukuba ufake yonke misela ka-creditors ukuya nengqeqesho ka-collective, baya kuba ubungqina kunye, isicwangciso, kude umthetho ka-ixabiso kugqatso. I-ukunyanzeliswa komthetho waba intended isicelo bonke abanamatyala, insolvency umthetho sele namhlanje enye injongo. Zimbini bankruptcy nemigaqo-nkqubo: abo osebenza iinkampani phantsi bankruptcy umthetho, osebenza abantu abo kuwa phantsi umthetho conso. Ukususela umthetho amabini anesithandathu julayi kukho inkundla nemigaqo-nkqubo okanye abachopheli: yogcino, isemthethweni redress kwaye liquidation-matyala. U-nkqubo: Ezi nemigaqo-nkqubo isicelo bonke abantu isebenzisa igunya elizimeleyo elinolwazi umsebenzi kwaye bonke yendalo kwaye isemthethweni abantu abucala umthetho. I-central umbutho kule nkqubo ingaba umbutho jikelele notion ka-cessation ka-neentlawulo: a debtor ngubani onako ayisasebenzi ukwenza sele ukuhlangabezana yangoku amatyala ukusuka ezikhoyo impahla yexabiso. Zokuqala ezimbini bakholisa ukufumana isicwangciso buyisela asethi liquidation tends ukuba liquidate impahla yexabiso kwaye yenza impahla yexabiso i-creditors.
Statistically phantse zonke liquidations kuza kukhokelela a nokungabikho impahla yexabiso, kule meko, umthetho iququzelela i izicwangciso amatyala.
Ezi iingxoxo ingaba vula i-debtor elungileyo ukholo, ayinako ukuba ahlawule zabo non-elinolwazi amatyala ngenxa kananjalo ziyabhatalwa, lento ayisasebenzi efanayo eyimali okanye efanayo amatyala.
Ezimbini engundoqo iindidi umgaqo-nkqubo: umgaqo-nkqubo phezu-indebtedness kwi-engqongqo evakalayo, kuba i-non-contentious uphawu, kuqhubeka phambi ikhomishini ka-ko-indebtedness.
Ezinye iintlobo collective iingxoxo ka-matyala indalo: umgaqo-nkqubo we personal imali, ivumela umgwebi ukuba imposiso yorhwebo lwangaphakathi i-erasure le amatyala ye-debtor, a debtor ke onikwe imvume yokulahlela. Kuba iinkampani kwi iingxaki Phambi ivula ka-collective iingxoxo, suspect ixesha lingamiselwa nge inkundla eza kukhokelela-aplikeshini ye nullity ye-suspect xesha, ukuvula ka-collective iingxoxo useka imigaqo kuba ukuphumeza Umgaqo: inkundla apho initiated i-collective iingxoxo unako kuba ubonile ukuba cessation ka-intlawulo yi-debtor wangaphambili existed phambi kwesihlalo kuvulwa inkundla kusenokuba traced emva kwixesha umhla cessation ka-neentlawulo. Suspect xesha kuya kuvumela ulawulo izenzo yenziwa yi-debtor kwi-cessation ka-lifike, uza kunceda eu inkundla annul izenzo i-debtor ngeli xesha. Eyodwa: shiya yona yomtshutshisi umgwebi, kodwa kuyimfuneko ukuba omnye umntu umthetho sele kokuba ulwazi cessation ka-intlawulo ngexesha umthetho kwenziwa. Kwimeko - Nullity ka-compulsory umthetho sele ibhekiswe kwibhunga precautionary amanyathelo athathwa yi - creditor ngexesha suspect ixesha, ngaphandle kokuba umthetho ka-seizure okanye ubhaliso provisional seizure wenziwe umhla wama-phambi umhla cessation ka-neentlawulo. Ukuba uqale inkqubo, conservatory, phambi cessation ka-intlawulo sibe kuqhubeka le nkqubo ngexesha suspect xesha. Kuba Nullity ye-eyodwa: kwaba ungeniswa yi-act, ye-izenzo apho eyiyo ukuphumeza amanyathelo, ingaba kubhekisa umbhalo na ukuba kweelwimi, isaziso wesithathu holder, kwaye yeqela eliphikisayo. isihlalo kuvulwa insolvency iingxoxo uya nqumamisa okanye prohibit zasekuhlaleni nemigaqo-nkqubo ka-uphumezo kwaye unikezelo nemigaqo-nkqubo ukuba awunayo unxulumaniso imini yokufunda. Jikelele unye ka-fixing i-debtor ke impahla yexabiso ukuvumela amacandelo karhulumente i-collective umgaqo-nkqubo ukwandisa impahla yexabiso ngokungqinelana nomgaqo-iinjongo ze-nkqubo al.
Oku umthetho usebenza kuwo onke amabango arising phambi kwesihlalo yokufunda, kodwa ukusukela umthetho wama- usebenza creditors ngeposi msinyane zabo amabango asingawo eluncedo kwi-nkqubo al.
Ngokulondolozayo, kuphela creditors abantliziyo amalungelo bazelwe emva isihlalo ivula nabantliziyo amabango ingaba kuluncedo, nokuzigcina ilungelo ukuziphatha ukunyanzeliswa iingxoxo kuba imali yabo ityala. La ngamazwi iingeniso ukuba ingaba impahla i-debtor, ex-seizure, kodwa eviction omzimba ngaphandle icebo. Yima ngexesha na collective iingxoxo, ukuze babe nokufumana differing iziphumo. Invalidity kwimeko apho imali okanye yogcino, emva eqhelekileyo: abazali isicwangciso kuvumela nokuqhubekeka ushishino, apho rhoqo ibandakanya a uhlenga-hlengiso ka-amatyala. Ke ngoko, creditors kuya kufuneka ukuba ukuthobela ezi deadlines, akavumeli kuba omtsha uphumezo nkqubo. Ukuba deadline hayi bathobela yi-debtor, kuphela commissioner ekwenzeni isicwangciso, usenokusebenzisa na ukunyanzeliswa umgaqo-nkqubo ngokuchasene debtor. Kwimeko liquidation, kukho closure ye-iingxoxo yi-ukuduka ye-eyimali, kaninzi le nkqubo kukhokelela a isihlalo ka-closure ngenxa akonelanga impahla yexabiso, isihlalo akusebenzi ukubuyiselwa kwi-creditors zabo ilungelo sue nganye. isihlalo misa yobhaliso ye-securities ngokuchasene debtor, kwi-siseko, ukususela isihlalo ivula na kunokwenzeka ukuba isibonelelo a ukhuseleko precaution.
Kulo mba ka-interim komlinganiselo, siza kuthatha a provisional yobhaliso apho uba zokugqibela msinyane i-creditor uzuza writ ka-uphumezo, final registration, retro, e-umhla provisional ubhaliso, ngoko ke ayisasebenzi kwalelwe ukuba senzo emva isihlalo yokufunda, oko nje sele ukuba abe ebhalisiweyo phambi kwesihlalo yokufunda.
I-kukho amacandelo karhulumente i-collective iingxoxo ukuhlawula ukuba caisse des dépôts et consignations, ingaba elusive. Xa debtor ngu-a isemthethweni umntu, kuyinto eqhelekileyo kuba igosa ibe ngokuqinisekileyo le isemthethweni umntu.
Enjalo inkokeli ubizwa ukuba ukufuna collective iingxoxo egameni inkampani.
Ukuba umlawuli kusenokuba sued njengokuba guarantor, uya kuba reluctant ukuba isicelo inkqubo yokufunda ka-iingxoxo al. Ukukhuthaza ezi iinkokeli ukubhengeza ngokukhawuleza kwazi bani, we-company, umthetho iye yalungiselela ukuba i-ulwandiso ka-suits ngokuchasene purchasers ka-collateral personal ngokuchasene debtor, umgaqo: ulwandiso isekho de u isihlalo apho adopts i imali isicwangciso, okanye yogcino, okanye kude kube isihlalo ka-liquidation. Amicable nemigaqo-nkqubo: uphumezo nemigaqo-nkqubo banelungelo kuba yamkelwa njengoko isigqibo ikhomishini ka-ko-indebtedness. Ubuyiselo nemigaqo-nkqubo ubuqu ngaphandle liquidation umgaqo-nkqubo ivuliwe xa debtor ke impahla engekho ngokwexabiso enokufumaneka ngalo. Le nkqubo vula, ngengcebiso yendibano ikhomishini ka-ko-indebtedness, ke ngoko kwi-siseko ukusuka admissibility isigqibo, unyanzeliso manyathelo ugxothiwe. Ivula isigqibo umgwebi, nto leyo yenza enforceable isigqibo ikhomishini, inkqubo kukhokelela i-erasure ka ityala ubuqu ukususela debtor, ngokunjalo yayo isiqinisekiso ukuzinikela. Imali yesiko kunye winding phezulu nge inkundla, kukho umgwebo ivula pronounced yi-inkundla kuqala isehlo, isihlalo uza kuzisa umgwebo uphumezo nemigaqo-nkqubo. Le nkqubo iya kukhokelela a isihlalo efanayo isihlalo ka-closure kuba inadequacy ka-yexabiso, kunye effacement yijaji yenkundla yonke into azinako recovered, (eks: njani ukwenza iphepha yima okanye isishwankathelo qaphela). Kule ndawo kuluncedo ukuba abafundi, kodwa kanjalo iingcali kwi-mthetho, a lawyer okanye lawyer.
Lawyer u kwi-real estate umthetho
I-imirhumo a lawyer specializing kwimpahla umthetho asingawo contractual Ezi iingcali uchaze isicwangciso-buchule ukuthenga i-real estate, ulawulo okanye iintengiso Umthetho firms siphendule le ukuguqula iimfuno real estate amaphulo kwaye akhaphe zabo abaxhasi ngendlela ezahlukeneyo izigaba zawoKule ndawo lunika wena kunye ngakumbi iinkcukacha kwi-real estate umthetho kwaye indima i-real estate lawyer. Ukuze ufumane iingcebiso ezivela a lawyer kwi-real estate ukwakhiwa, omnye ingaba ukukhetha phakathi i-ukuqeshwa kwi-ofisi okanye buza umbuzo ngoko nangoko kwi-intanethi okanye nge-ifowuni. Umthetho ichaza imigaqo malunga ubudlelwane phakathi phakathi condominium abanini-mhlaba, etrasti norhwebo iimanyano i-co-mhlaba A ifemi ukuba sele ingcaphephe kwi-umthetho engaselunxwemeni ucwangciso kuthatha care umhlaba umhlaba imiba kwaye real estate apho ubuso abantu kwaye abasebenzi. Ezi abaqondisi-mthetho intervene ukusombulula iingxaki yamalungelo ukuba ukwakhiwa, condominium umthetho, litigation, ulwaphulo-mthetho kwaye zasekuhlaleni ucwangciso.
A lawyer ingcali kwi-real estate umthetho unako intervene ukuze ukusombulula ezahlukeneyo disputes malunga abarhwebayo leases, ukwakhiwa amaphepha-mvume, isaziso, izivumelwano a ubomi inzala, usufruct, renovation, foreclosure umthetho ingcali iyafumaneka kwi-intanethi ukuze anike ingcebiso ukuba abasebenzisi.
A lawyer specializing kwi-real estate umthetho unako intervene kwi ungquzulwano kwi ukuqeshisa isivumelwano, umthetho ka-intengiselwano, ilungu bar association unakho ngokunjalo kunika ingcebiso phambi na enkulu isigqibo lwenziwa ngokunjalo phambi na ukuthenga, drafting a ukuqeshisa, isakhiwo okanye ingqokelela ka-kukrazulwa.
Umsebenzi we-condominium - Ooreka
Pháp lý cung cấp của việc làm ở Algeria